Archive du 20170621
Ahmad, filohan’ny CAF Kolikoly avo lenta no naha lany azy ?
Lasa resabe eo amin’ny tontolon’ny baolina kitra maneran-tany amin’izao ny fisian’ny resaka kolikoly avo lenta mahasaringotra ny filohan’ny Federasionina iraisam-pirenena (FIFA) Gianni Infatino sy ny Sekretera jeneraly Fatma Samoura.
Antoko MFM Ny fokontany no mila ampiasana ny FDL
Taorian’ny fanoloran’ny antoko MFM (Mitolona ho an’ny Fampandrosoana an’i Madagasikara) soso-kevitra ny amin’ny
Marc Ravalomanana mivady Miatrika fivoriana any Canada
Niatrika ny fanokafana ny fivoriamben’ny Metropolis na ireo tanàn-dehibe manerana izao tontolo izao sy ny AIMF (Association Internationale de Maires Francophone)
Governemanta Mikaondoha any Toliara
Ny tolakandron’ny alatsinainy 19 jona 2017 no efa tany Toliara ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier sy ireo mpikambana ao amin’ny governemanta hanatrika ny filankevitry ny minisitra mitety faritra andiany fahatelo tarihin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina hatao anio alarobia 21 jona.
Afera maizina sy kolikoly Potehan’ny HVM ny firenena
Efa-bolana lasa izay, izany hoe ny 21 febroary 2017 no namoahana teto ny lahatsoratra nitondra ny lohateny hoe :”Fitondran’ny HVM, fanjakan-jiolahy”.
Antenieram-pirenena Tsimbazaza Volavolan-dalàna 2 hahazoana misambo-bola no lany
Solombavambahoakan’i Madagasikara niisa 37, omaly talata 20 jona, no nandany tsy nisy nitsipaka ireo volavolan-dalàna manome alalana ny
Aza jamban’ny taolana !
Tena miaiky antsika mihitsy aho ry Jean fa tena mora hampirevena mihitsy isika an ! Mody maka tsy taitra Rafôrsa sy ny ekipany hatramin’izay ka navelany ho donton-drafahantrana teto isika
Alain Ramaroson Nahemotra indray ny fitsarana azy
Miitatra toy ny sima misioka ny raharaham-pitsarana an’i Alain Ramaroson.
Iza no hanetry tena ?
An-daniny, ireo mpanohitra ny fitondrana dia tsy mitsahatra ny milaza fa tsy maintsy ravana sy tsy azo ekena intsony izao fitondrana misy ankehitriny izao.
Lalàna manome vahana ny fanalan-jaza Nolanian’ny solombavambahoaka
Lany teny anivon’ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna vaovao mifehy ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana manafoana ny lalàna tamin’ny 31 jolay 1920. Manamora ny fisorohana ny vohoka sy ny fanalanjaza izy io. Hanara-dia ny solombavambahoaka ve ireo antanantohatra isan-karazany,
ALLO SAKAFO Nametraka mpahandro sakafo amina toerana malaza eto an-drenivohitra
Ny orinasa Allo Sakafo ihany hatreto no hany orinasa afaka mamaly ny filàn’ny olona sahiraa nefa te-hihinana sakafo ara-pahasalamana sy mafilotra.